China Dryer Machira, Dryer Screen, Spiral Dryer Canvas Mugadziri
Tsanangudzo:Dryer Machira,Screen Dryer,Spiral Dryer Canvas,Polyester Spiral Belt,Sldf,Spiral Dryer Fabric
Home > Products > Pepa Machine Machira > Spiral Dryer Screen
Zvigadzirwa zve Spiral Dryer Screen , isu tiri vashandi vanobva kuChina, Dryer Machira , Screen Dryer vatengesi / firisi , mabhizimisi ekugadzirwa kwezvakakura zve Spiral Dryer Canvas R & D nekugadzira, isu tine shanduro yakakwana yekutsvaga kutengesa uye kutsigirwa kwekambani. Tarisira mberi kubatana kwako!
Polyester Spiral Fabric nguo neiyo Kuzadza Wire  Bata Ikozvino
Polyester Spiral Type Industrial Filter Fabric Nguo  Bata Ikozvino
Polyester Spiral Yefaira Press Wire Fabric  Bata Ikozvino
Yakakura Loop Pepa Kugadzira Spiral Dryer Fabric  Bata Ikozvino
Pepa Machine Dryer Chikamu Wire Fabric  Bata Ikozvino
Polyester Spiral Belt Kune Zvese Giredhi Pepa Kugadzira  Bata Ikozvino
Medium Loop Spiral Link Dryer Wire Fabric  Bata Ikozvino
Pepa Kugadzira Polyester Dryer Screen  Bata Ikozvino
Polyester spiral dryer machira ekurapa kwemvura kune pepa mill  Bata Ikozvino
Polyester Spiral Dryer Canvas neKuzadza monofilament  Bata Ikozvino
Polyester Spiral Dryer Yakasarudzika neKuzadza Wire  Bata Ikozvino
Polyester Spiral Dryer Screen neKuzadza Monofilament  Bata Ikozvino
Polyester Spiral Press Filter Belt  Bata Ikozvino
Diki Loop Spiral Dryer Fabric yeKraft PM  Bata Ikozvino
Spiral Link Dryer Fabric YepaPepa Kugadzira Mashini  Bata Ikozvino
polyester spiral bhandi rePepa Machine  Bata Ikozvino
Diki Loop spiral dryer canvas yeKraft PM  Bata Ikozvino
Polyester Spiral Unganidzo Dryer Screen  Bata Ikozvino
Polyester Spiral Fabric nguo neiyo Kuzadza Wire Spiral dryer machira inoisa pepa rewebhu mushure mekupfuura chikamu chedanho nekunamatira webhu kune inopisa silinda. Muchikamu chakawomesa chemushini wepepa, pepa pepa rinofamba richitenderedza...
Polyester Spiral Type Industrial Filter Fabric Nguo Spiral dryer machira inoisa pepa rewebhu mushure mekupfuura chikamu chedanho nekunamatira webhu kune inopisa silinda. Muchikamu chakawomesa chemushini wepepa, pepa pepa rinofamba richitenderedza...
Polyester Spiral Yefaira Press Wire Fabric Polyester Spiral Filter Presser Canvas inogona kukamurwa kuita diki loop, yepakati loop, uye yakakura loop. Iyo yakaoma machira akagadzirwa zvinoenderana neFinland chigadzirwa standard iyo ine yakagadzika...
Yakakura Loop Pepa Kugadzira Spiral Dryer Fabric polyester spiral bhandi inogona kukamurwa kuita diki loop, yepakati loop, uye rakakura loop. Iyo sldf yakagadzirwa zvinoenderana neinogadzirwa chigadzirwa cheFinland icho chine mhando yakagadzikana...
Pepa Machine Dryer Chikamu Wire Fabric Chinyorwa che machira akaomesesa: 100% Polyester Ruvara rwe yakaoma chidzitiro: chena uye bhuruu CFM ye spiral dryer canvas: 900cfm kusvika 1250cfm Model of Spiral dryer machira: Lop yakakura, yepakati loop uye...
Polyester Spiral Belt Kune Zvese Giredhi Pepa Kugadzira machira akaomeswa chikamu chekuomesa chepa wetepa mapepa ewebhu. Iyo yakajairika yekuomesa system inogona kupukuta iyo mvura yewebhu kubva pa60% kunyorova kusvika ku2% kunyorova nerubatsiro...
Medium Loop Spiral Link Dryer Wire Fabric dryer screen Type: Diki chiuno, yepakati loop, hombe loop. Rongedza kurongeka zvakare yakagamuchirwa. Iyo yakaoma iyo skrini yakagadzirwa zvinoenderana neyakagadziriswa chigadzirwa cheFinland icho chine...
Pepa Kugadzira Polyester Dryer Screen Izvo zvinyorwa zvekaomesesa chidzitiro: PET, PA uye PPS. Machira edu akaomeswa anogona kuvezwa mudiki, chiuno chepakati, chiuno chakakura sekuenderana kwemweya; Ruvara rwemukati mevhu rakaomeswa:
Polyester spiral dryer machira ekushandiswa kwemvura kurapwa kwepepa mill inonyanya kushandiswa mumapepa mills kuomesa mapepa, kuomeswa kwemachira ekudhinda machira uye dhaye zvigadzirwa, inoshanda kune inotevera kukurumidza m600 / s.For...
Polyester ondira pakaomeswa canvasn polyester spiral bhandi inogona kukamurwa kuita diki loop, yepakati loop, uye rakakura loop. Iyo yakaoma iyo skrini yakagadzirwa zvinoenderana neyakagadziriswa chigadzirwa cheFinland icho chine mhando...
Polyester Spiral Unganidzo Dryer Fabric ine Kuzadza Wire Muchikamu chakawomesa chemushini wepepa, pepa pepa rinofamba richitenderedza rakakura-diameter heated cylinders, mvura yasara inobviswa nekubuda mvura. Saka machira akaomeswa anofanirwa kunge...
Spiral dryer machira neKuzadza Wire Iyo machira akaomesesa akagadzirwa zvinoenderana neFinland chigadzirwa standard iyo ine yakagadzika mhando uye yakareba basa rehupenyu. dryer screen Chinyorwa: PET, PA,
Polyester Spiral Press Firita Inoridza Belt Polyester / synthetic sldf inogona kukamurwa kuita diki loop, yepakati loop, uye rakakura loop. Iyo yekupaza yakaoma machira yakagadzirwa zvinoenderana neFinland chigadzirwa chiyero chine mhando...
Diki Loop Spiral Dryer Fabric Panzvimbo yemachira emuchina wokupukuta machira uye akaomeswa akanzwa, machira akaomesesa aishandiswa zvakanyanya mukugadzira kadhibhodi, Kraft pepa, pepa rekushambadzira, tikiti rechitima, rimwe chete rakatarisana...
Spiral Link Dryer Fabric YepaPepa Kugadzira Mashini Yedu yakaoma machira ndeyekuomesesa chikamu cheta wet mapepa ewebhu. Iyo yakajairika yekuomesa sisitimu inogona kupukuta iyo mvura yewebhu kubva pa60% kunyorova kusvika ku2% kunyorova nerubatsiro...
polyester spiral bhandi rePepa Machine Yakakura Loop yakaoma machira mamiriro: Thread diangle: warp 0.9mm; weft 1.1mm Iko kuratidzwa kweusina humwe: LW4.0x8.0mm Kurera: 1.7kg / m2 ukobvu: 3mm mvumo yemhepo: 1250cfm. Chinyorwa: 100% polyester (PET)...
Diki Loop spiral dryer canvas yeKraft PM Nhoroondo dzediki diki dzakaomeswa machira: Dhayeti dhayeti: warp 0.5mm; weft 0,7mm maratidziro azvinoita single: LW3.2x5.2mm uremu: 1.1kg / m2 ukobvu: 1.9mm air permeability: 900cfm Chinyorwa chechiitiko...
polyester spiral bhandi machira akaomeswa anogona kukamurwa kuita diki, chiuno chepakati, uye chiuno chikuru. Iyo yakaoma iyo skrini yakagadzirwa zvinoenderana neyakagadziriswa chigadzirwa cheFinland icho chine mhando yakagadzikana uye hupenyu...
China Spiral Dryer Screen Vatengi
HUATAO GROUP inyanzvi bhizinesi inoshanda mukugadzira mapepa mchine machira kubva kuChina. Iyo kambani ine nyanzvi, yakanatswa, inoshamisira yekutanga-kirasi timu kugovera spiral dryer canvas, poleyster spiral mesh, papermaking waya, spinal dryer machira, yekurongedza mapepa muchina, craft mapepa muchina, kuputira uye anodhinda mapepa muchina, bepa repepa muchina. mhando dzese dzakaomeswa machira epepa indasitiri.
Dryer Machira Screen Dryer Spiral Dryer Canvas Polyester Spiral Belt Sldf Spiral Dryer Fabric Yakasukwa Dryer Machira Dryer Screen